तपाईको लागि तातो दूध बढी फाईदाजनक छ वा चिसो दूध ? जानी राखौँ – Etajakhabar
तपाईको लागि तातो दूध बढी फाईदाजनक छ वा चिसो दूध ? जानी राखौँ
ताजा खबर:- दूध पिउनु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ र यो क्याल्शियम, पोटाशियम र भिटामिन-डी को राम्रो स्रोत हुन्छ । तर दूधको विषयलाई लिएर विभिन्न तथ्य देखिन्छन् । कतिपय मानिसको भनाई छ कि तातो दूध स्वास्थ्यका लागि बढी फाइदाजनक हुन्छ भने कतिपय मानिसको भनाई छ कि चिसो दूध पिउनु पर्दछ । हुनत: कतिपय मानिस तातो र चिसो दूधको छनौट टेस्टको आधारमा गर्छन । तर सत्य कुरा यो छ कि कतिपय अवस्थामा तातो दूध बढी उपयोगी हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा चिसो दूध बढी उपयोगी हुन्छ । यसकारण आज हामी चर्चा गर्दैछौँ, तपाईको स्वास्थ्यका हिसाबले तातो दूध बढी फाइदाजनक हुन्छ वा चिसो दूध बढी फाइदाजनक हुन्छ ।
यस स्थितिमा तातो दूध पिउनुहोस्- तातो दूधको सबैभन्दा ठूलो लाभ हो कि, यो सजिलै पच्न सक्छ । यदि तपाईलाई लेक्टोज सजिलै पाचन हुँदैन भने चिसो दूध पिउनबाट बँच्नुहोस् किनकि यसलाई पाचन गर्न अलि कठिन हुन्छ । तातो दूधमा लेक्टोज कम हुन्छ र यसबाट पखला र अपचको जस्ता समस्या हुँदैन ।
तातो दूध पिउँदा निन्द्रा लाग्छ- तातो दूधले स्वास्थ्य लाभको साथै राम्रो निन्द्रा पनि दिन्छ । यदि तपाई पनि निन्द्रा नलाग्ने समस्याले चिन्तित हुनुहुन्छ भने सुत्नुअघि एक गिलास तातो दूध पिउन सक्नुहुन्छ । दूधमा ट्रिप्टोरफैन नामक एमिनो एसिड हुन्छ, जसले सेरेटोनिन र मेलाटोनिन नामका केमिकल उत्पन्न गर्छ, जसले तपाईलाई आराम दिन्छ र राम्रो निन्द्रा लाग्छ ।
एसिडिटीको समस्या हुँदा चिसो दूध पिउनु हुँदैन- चिसो दूध पेटमा एसिडिटीको कारण पोल्ने समस्याबाट आराम पुर्याउनका लागि राम्रो पदार्थ हो । खाना खाइसकेपछि आधा गिलास चिसो दूध पिउँदा एसिड उत्पादन नष्ट हुन्छ र एसिडिटीको समस्याबाट छुटकारा मिल्छ ।
चिसो दूध पनि फाइदाजनक हुन्छ- चिसो दूध पिउँदा तपाईको शरीरमा पानीको कमी हुँदैन । बिहानको समय चिसो दूध पिउनु सबैभन्दा राम्रो समय हुन्छ । यदि तपाई फ्लू र कोल्डले पीडित हुनुहुन्छ भने चिसो दूध पिउनबाट बँच्नुहोस् ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, कार्तिक २५, २०७४ समय: २०:०२:०३